Midowga Afrika oo diiday dalab ka yimid Villa Somalia | KEYDMEDIA ONLINE
Midowga Afrika oo diiday dalab ka yimid Villa Somalia
Midowga Afrika ayaa iska diiday dalab uga yimid dowladda Soomaaliya ee ku aaddanaa in dib loo dhigo ergayga cusub ee Midowga Afrika usoo magacawday inuu dhexdhexaadiyo dhimacyada isku haya doorashada dalka.
MUQDISHO, Soomaaliya - Midowga Afrika ayaa diiday codsi uga yimid dowladda Soomaaliya oo ahaa in dib loo dhigo soo dirista ergeyga gaarka ah ee Midowga Afrika John Mahama ee loo xil saaray dhexdhexaadinta dhinacyada isku haya doorashada Soomaaliya.
Villa Somalia ayaa horay u dalbatay in ergeyga gaarka ah uu yimaadaa ka dib markii geedi socodka uu hogaaminayo Rooble la soo gabagabeeyo, iyadoo ay madaxtooyadu dooneyso in si hoose loo dhammeeyo arrimaha muranka dhaliyay, Keydmedia Online ayaa warbixintaan qortay Isniintii.
Keydmedia Online ayaa ogaatay in Dowladda Soomaaliya ay diidmada diblumaasigaan u cuskatay in John Mahama, uu xariir dhaw la leeyahay Madaxda dalka Kenya, kuwaas oo arrimo gaar ah ay isu hayaan Madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday ee Soomaaliya Farmaajo.
Kulankii Golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay ee ku saabsanaa arrimaha doorashooyinka Soomaaliya ayaa lagu go'aamiyay in arrinta muranka dhalisay ee doorashooyinka Soomaaliya loo xil saaro Midowga Afrika, waxaana shir ay yeesheen Golaha Amniga iyo Nabadda ee Midowga Afrika ay soo jeediyeen in la magacaabo ergay gaar ah oo qaabilsan arrimaha doorashooyinka Soomaaliya.